स्रोत नखुलेको रू. डेढ करोडसहित नागढुङ्गाबाट दुई जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको रू‍. एक करोड ४७ लाख ८६ हजारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पेस्तोलमा प्रयोग हुने ५० थान गोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना पक्राउ परेका छन्। झापाको मेचीनगर–२, का २० वर्षीय बद्रीहाङ राई ९ एमएमको पेस्तोलमा लाग्ने गोलीसहित पक्राउ गरेका हुन्।
रू. ४४ लाख भन्दा बढी ठगी गर्ने युवक पक्राउ सर्वसाधारण किसानलाई लाखौँ ठगी गर्ने एकजना युवकलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न गाउँका २३ जना किसानबाट ४४ लाख ७८ हजार ५०० रूपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले वृन्दावन नगरपालिका–७ हर्षाहाका २८ वर्षीय अनिलकुमार पटेललाई पक्राउ गरेको हो।
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न फरार अभियुक्त पक्राउ दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न ठहर भएका एकजना फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्न ठहर भएका दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–३ द्वारीका ५८ वर्षीय हरिलाल पुनलाई प्रहरीले घरैबाट पक्राउ गरेको हो।
दक्षिण अफ्रिका पुर्‍याएर मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा एक महिला पक्राउ दक्षिण अफ्रिका पुर्‍याएर मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा एक महिलालाई प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्यूरोले आज पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोककी अनिता तामाङ भन्ने अनिता सुनुवार रहेको ब्यूरोले जनाएको छ। उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–७ चावहिलबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता अनुरागकुमार द्विवेदीले जानकारी दिए।
चार जना महिलालाई कुवेत पुर्‍याएर बेच्न खोज्ने पक्राउ
चार जना महिलालाई गैरकानूनी रूपमा कुवेत पुर्‍याएर बेचविखन गर्न खोजेको आरोपमा एक जना पक्राउ गरेका छन्। मोरङ कटहरी गाउँपालिका-९, स्थायी ठेगाना भएका २९ वर्षीय राज भन्ने राजेशकुमार चौधरीलाई प्रहरीले काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट पक्राउ गरेको हो।
रौतहटका आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक
रौतहटमा मापदण्ड विपरीत अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका आठ वटा क्रसर उद्योग तथा वासिङ उद्योगहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
बलात्कार मुद्दाका आरोपीलाई जिल्ला अदालतबाट सफाई
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. २ का २९ वर्षीय दीपेन्द्र चौधरी (कुश्मी) लाई अभियोग दाबी नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। कुश्मीलाई जिल्ला अदालतले १६ मंसीरमा सफाई दिएको हो।